Usatarisire chidzidzo cheShona pasi | Kwayedza
Usatarisire chidzidzo cheShona pasi
03 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-02T14:34:54+00:00 2018-08-03T00:00:02+00:00 0 Views
REGAI tirambe takabata ipapo dzamara tagutsikana kuti zvirokwazvo tsumo dzapinda mumbariro dzepfungwa.
Bvunzo riri kuswedera zuva nezuva uye gadziriro dziri kufamba zvakanyanya nekuti tiri kuona vana vachikumuka muzvikoro kana zuva ropinda muna amai varo. Vanenge vaine varairidzi vavo vachiedza kusona pese pakasaririra kuti vasawane anozochema munaGumiguru.
Nguva yekutora goho rebvunzo inguva inotambudzika vana nevabereki kunyanya kana vana vasina kubuda zvakanaka mubvunzo. Vanodzivaira nezvikoro vachiedza kuwanira vana nzvimbo.
Hazvirevi kuti nzvimbo dzinenge dzisipo asi kuti goho racho rinenge risingakodzeri. Chimwe chinorasa goho revana chidzidzo cheShona icho vana vanoita chekubatira padumbu sebhotoro rechinwiwa asi chichizovakandira kure kure.
Mukurarama tinowirwa nematambudziko akasiyana siyana. Mamwe anenge akakomba zvekuti tinogona kushaya pekutangira kuti tiapedze kana kuti tiwane maanzvengero. Ndipo panodaira tsumo inoti, Ava mangongomera mupasha wapfura musoro. Panenge pasina zvekuita asi kutony’ura mudambudziko racho.
Waita womutowa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro. Iyi itsumo inotaurwa panenge paparadzwa pfuma imwe ichisiiwa kana kuchengeterwa mangwana. Inogona zvakare kushanda paya panowirwa munhu nematambudziko maviri panguva imwechete iye omira mira dzamara abudirira mune rimwechete okundikana rimwe.
Nyaya iya yekugona kuona chakaipa kana chakanaka uri wega inosvika pakuti munhu adzidzire zvakare kuona panodiwa kupiwa mazano navamwe kana kuzvifungirawo. Zvino kunowanikwawo vamwe vanongomirira kuudzwa zvese vasingamboisawo pfungwa dzavo. Ndiko kusaka vakuru vakati, Muto wekupungurirwa haupedzi sadza.
Muroyi munhu kubaiwa anochema. Apa takanangana nekugarisana kwatinoita mumamana edu. Vanhu vanoitirana zvinhu zvakasiyana, zvimwe zvakanaka zvimwe zvakaipa nokudaro vamwe vanhu vanozivikanwa nohupi hwavo. Chero vanhu ivavo vakaita zvakanaka sei, vanhu havavape mukana vanongovazora chakaipa. Ndiko kusaka vanhu vachitsiura vachitaura tsumo iyoyi.
Mhosva dzinoparwa zvakasiyana uye vanhu vanotongerwa mhosva dzavanenge vapara asi munhu anofanirwa kupiwa nguva yakakwana yokuzvidzivirira kubva mune zvaanenge achipomerwa. Anofanirwa kuzvipindurira kwete kupiwa mutongo asipo kana asina kumbobvunzwawo. Ndiko kusaka zvichinzi muranda haatongerwi mhosva asipo.
Kuroorera mukarahwa muchena wapinza udyi mumba.
Zvinoreva kuti kana mukuwasha akaroora kubva mumba yavatezvara varombo haana zororo rekushava. Hupenyu hwake hwese anosunzira imba yake pamwechete neyavatezvara vake.
Chinhu chaunodisisa zvikuru hauchiwane nyore nyore. Zvaunoshuvira nemwoyo wako kazhinji hauzviwane nokudaro vanogona kutaura vanoti, Panoda mwoyo gwanzi harisvike.